မည်သည့်မေးလ်ပေါင်းစည်းမှု၏ရွေးချယ်မှုကိုကက်တလောက်ပုံနှိပ်ရန်အသုံးပြုသနည်း။ - အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
အဓိက > အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ > mail ပေါင်းစည်း catalog - လုပ်ကိုင်နိုင်သောဖြေရှင်းချက်
mail ပေါင်းစည်း catalog - လုပ်ကိုင်နိုင်သောဖြေရှင်းချက်
အသုံးပြုသူသည်လုပ်နိုင်သည်အသုံးပြုသည်ဖော်ပြပါoption ကိုရန်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်ရန်မေးလ်သွားစာရွက်စာတမ်း: Toolbar Mailings tab မှာ Finish ကိုရွေးပါ။ Finish & ကိုနှိပ်ပါ။သွားကိုနှိပ်ပါ၊ ပြီးနောက်ကိုနှိပ်ပါပုံနှိပ်ပါစာရွက်စာတမ်းများ။1 ဇွန်။ 2020
FreeWatch ထုတ်ဝေသူအတွက် WOWT Peace of Mind ၏သင်ခန်းစာအပြည့်အစုံကိုအခမဲ့ရယူပါ။ ကတ်တလောက်စာမျက်နှာများကို အသုံးပြု၍ ကုန်ပစ္စည်းကတ်တလောက်ဖန်တီးရန်သင့်အားမြန်ဆန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းကိုပေးသည်။
ဤအင်္ဂါရပ်သည်သင့်အားဤအချက်အလက်ရှိလျှင်ကုန်ပစ္စည်းအမည်၊ ဖော်ပြချက်စျေးနှုန်းနှင့်ပုံပါ ၀ င်သည့်သတင်းအချက်အလက်များပါ ၀ င်သည့်ကုန်ပစ္စည်းစာရင်းတစ်ခုကိုဖန်တီးရန်သင့်အားခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းသည်ကက်တလောက်စာမျက်နှာများနှင့်ပြက္ခဒိန်စာမျက်နှာများပါ ၀ င်ရန်စိတ်ကြိုက်ထုတ်ကုန်ကတ်တလောက်ကိုဖန်တီးရန်ထုတ်ဝေသူကက်တလောက်ထဲသို့အလွယ်တကူကူးထည့်နိုင်သည် သင်၏ထုတ်ဝေမှုတွင်သင်၏ထုတ်ဝေမှုတွင်သင်ကတ်တလောက်စာမျက်နှာများကိုထည့်သွင်းလိုသည့်နေရာမတိုင်မီချက်ချင်းရောက်ရှိနေသောလမ်းညွှန်နေရာတွင်ရှိသည့်စာမျက်နှာကိုရွေးပါ၊ ပြီးနောက်အတွင်းရှိ Catalog Pages ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ Publisher ဖဲကြိုးရှိ Insert tab တွင်စာမျက်နှာရန်ပုံငွေအုပ်စုပေါ်လာလိမ့်မည်။ ထို့နောက်သင့်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုထဲသို့ catalog ပေါင်းစည်းခြင်းစာမျက်နှာများကိုထည့်သွင်းပါ။ ကက်တလောက်စာမျက်နှာများသည်လမ်းညွှန်နေရာတွင်တစ်ခုတည်းရွေးချယ်နိုင်သောအရာဝတ္ထုအဖြစ်ပေါ်လာမည်။ ရွေးချယ်လိုက်သောအခါ၊ ပေါင်းစည်းခြင်းနေရာများကိုသင်ရွေးချယ်သောYourရိယာသင်၏ထုတ်ကုန်ဒေတာအရင်းအမြစ်သည်areaရိယာပြင်ပ၌ရှိသောအရာဝတ္ထုများအတွက်သင်၏ထုတ်ကုန်ဒေတာအရင်းအမြစ်ရှိမှတ်တမ်းတစ်ခုစီအတွက်ဤareaရိယာကိုထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်ပါလိမ့်မည်။ ဥပမာထုတ်ကုန်ကိုပြီးမြောက်ရန်သင်အသုံးပြုနိုင်သည့်ခလုတ်များ ဒေတာအရင်းအမြစ်ကိုကက်တလောက်စာမျက်နှာများနှင့်ချိတ်ဆက်ရန် catalog ဖန်တီးမှုသည်ဖဲကြိုးရှိ Catalog Tools Contextual tab ၏ Format tab ရှိ Home ခလုတ်အုပ်စုရှိ Add List ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည်ကုန်ပစ္စည်းအသစ်များစာရင်းကိုဖန်တီးလိုပါကကုန်ပစ္စည်းအမည်အသစ်ဇယားကွက်ကိုဖွင့်ရန်ကုန်ပစ္စည်းအမည် ID စျေးနှုန်းနှင့်ပုံရိပ်ကိုရရှိနိုင်သည့်ကွက်လပ်များတွင်ဖွင့်ရန် Enter ခလုတ်အသစ်ကိုရွေးချယ်ရန်အမိန့်ကိုရွေးချယ်ပါ။ သင်၏ကုန်ပစ္စည်းမှတ်တမ်းများကိုထည့်ပြီးသောအခါစာပို့ခြင်းစာရင်းအသစ်ပေါ်ပေါက်လာပြီး OK ကိုနှိပ်ပါ။ ဖိုင်ကိုသိမ်းရန်နှင့် catalog merge product list alog အကွက်ကိုဖွင့်ပါ။ သင်ရှိပြီးသားထုတ်ကုန်အချက်အလက်အရင်းအမြစ်ကိုရွေးလိုပါက 'Use Existing List' command မှ Add စာရင်းခလုတ်များ၏ drop down menu ကို။
ထုတ်ဝေသူမှရွေးချယ်ထားသောအချက်အလက်အရင်းအမြစ်ဇယားကွက်ကိုဖွင့်ပြီးသင်ရှိနှင့်ပြီးဖြစ်သောထုတ်ကုန်အချက်အလက်အရင်းအမြစ်ကိုသင်ရွေးနိုင်သည်။ ထို့နောက် Open ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးအချက်အလက်အရင်းအမြစ်မှမည်သည့်ဇယားများသို့မဟုတ်သင်ထောက်ကူစာရွက်များကိုမဆိုရွေးချယ်ပါ။ ကုန်ပစ္စည်းစာရင်းအသစ်လုပ်သည့်နည်းတူ Catalog Merge ကုန်ပစ္စည်းစာရင်းကိုဖွင့်လှစ်လိမ့်မည်။ မကြာခဏသင်ရွေးချယ်သော 'Outlook အဆက်အသွယ်များရွေးချယ်ခြင်း' command သည် drop-down ကိုအသုံးပြုသည် စာရင်းထည့်သွင်းဖို့ခလုတ်များ၏ menu ကို။ အကယ်၍ သင်၏အဆက်အသွယ်အချက်အလက်များကို Outlookcontacts ဖိုင်တွဲတွင်သိမ်းဆည်းပြီး ၀ န်ထမ်းလက်စွဲသို့မဟုတ်ဌာနရည်ညွှန်းလမ်းညွှန်ကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခုသို့ပေါင်းစည်းလိုပါက၎င်းကိုအသုံးချပါက၎င်းကိုသင်လုပ်လိုပါကကျွန်ုပ်တို့အားပို့လိုသော Outlook အဆက်အသွယ်ဖိုလ်ဒါကိုရွေးချယ်ပါ။ data ရင်းမြစ်နှင့်သင်ကအချက်အလက်ရင်းမြစ်များကို catalog စာမျက်နှာများနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးလျှင် OK ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ၊ ထို့နောက်ပေါင်းစည်းခြင်းကိုနှိပ်ပါ။ ထုတ်ကုန်စာရင်းဇယားကွက်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ သို့သော်၎င်းပေါ်မလာပါကသင်တည်းဖြတ်သောစာရင်းကိုနှိပ်ပါ။ tab ၏ Format tab ရှိ Home ခလုတ်အုပ်စုများကိုသူတို့ဖွင့်ရန် context menu ရှိ catalog tools ကိုနှိပ်ပါ။
မိုက်ကရိုဆော့ကုတရား ၀ င်နံပါတ်
သင်ဤ dialog box ကို Email Merge Recipients ပေးသည့်နည်းအတိုင်းအသုံးပြုသည်။ ဤ dialog box တွင် catalog ပေါင်းခြင်းအတွက်သင်အသုံးပြုလိုသောမှတ်တမ်းများကိုရွေးချယ်ပြီးသောအခါ OK ခလုတ်ကိုနှိပ်ရုံဖြင့်သင်မည်သည့်ထုတ်ကုန်ပုံစံကိုသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ ဖဲကြိုးအတွင်းရှိ Catalog Tools အခြေအနေ tab ၏ Format tab ပေါ်ရှိ Layout ခလုတ်အုပ်စုထဲမှပေါ်လာမည့်စာရင်းထဲမှလိုချင်သောအဆင်အပြင်ကိုရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့်သင်၏ catalog စာမျက်နှာများအတွက်အသုံးပြုရန်အတွက်သင်ရွေးချယ်လိုက်သော layout ပေါ် မူတည်၍ မြင်ကွင်းပေါ်ရှိညွှန်ကြားချက်များကိုလည်းတွေ့လိမ့်မည်။ ကော်လံများနှင့်သတင်းအချက်အလက်အုပ်စုများနှင့်အတူသင်တို့၏ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက် layout ကိုဖန်တီးရန်သင်၏ကက်တလောက်စာမျက်နှာများ၏ကဏ္inများတွင်အချက်အလက်များကိုနေရာချရန်အကောင်းဆုံးနေရာကိုမည်သည့်နေရာတွင်ရှာဖွေမည်နည်း။ Layout ခလုတ်အုပ်စုရှိ Rows and Columns ခလုတ်ကိုနှိပ်နိုင်သည်။ Catalog Tools Contextual tab ၏ Format tab ကိုနှိပ်ပါ။ ထို့နောက်ဇယားကွက်ထဲမှ n နံပါတ်များနှင့်ကော်လံများနှင့်အတန်းများကိုဖယ်ရှားရန်ဇယားကွက်ထဲ၌သင်ရွေးချယ်နိုင်သည်ဟုယူဆနိုင်သည်။ Fill Order drop-down list မှသင်ရွေးချယ်လိုသော Columns and Rows အတွက်သင်လိုချင်သောအမိန့်ကိုဖြည့်ပါ။ သတင်းအချက်အလက်ဘယ်လိုပြန်လုပ်သလဲဆိုတာကိုရွေးရန်သင်တက်နိုင်သည်၊ တက်၊ သို့မဟုတ်သို့သို့မဟုတ်ထို့နောက် drop-down menu မှတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်သည်။
Catalog အတွင်းရှိ Range များကို 'Repeat Ranges' drop-down list မှရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်သည်။ သင်၏areaရိယာတစ်ခုစီကို၎င်း၏ထပ်ခါတလဲလဲစီစဉ်ထားခြင်းရှိနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်စာမျက်နှာ၏အောက်ခြေရှိသို့မဟုတ်ကော်လံများသို့မဟုတ်ခြေထောက်များကိုသို့မဟုတ်စာမျက်နှာ၏အောက်ခြေသို့မဟုတ်ခလုတ်အုပ်စုအတွင်းရှိအတန်းများကိုသင်အမှန်တကယ်ထပ်ခါထပ်ခါပြုလုပ်သောအချက်အလက်ထဲသို့ထည့်ရန်သင်အသုံးပြုနိုင်သည့်ခလုတ်များကိုထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဤသို့ပြုလုပ်ရန်စာမျက်နှာရှိကဏ္များကိုသင်ပထမ ဦး ဆုံးသင်၏စာသွင်းခြင်းအမှတ်ကိုသင်စာတွဲခြင်းနေရာကိုထည့်သွင်းလိုသည့်ကတ်တလောက်ထဲသို့ထည့်ပါ။ ထို့နောက်ရွေးချယ်ထားသည့်တည်နေရာတွင်စာမူပေါင်းစည်းခြင်းနေရာကိုထည့်သွင်းရန်စာသားအကွက်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ image data field အတွက် placeholder ကိုရွေးပြီး image field တစ်ခုထည့်ရန် dialog box ကိုဖွင့်ရန် image placeholder ကိုနှိပ်ပါ။ ဒီ dialog box ကို အသုံးပြု၍ သင်၏ data ရင်းမြစ်ရှိ field ကိုပြရန် producte၏ပုံကိုရွေးပြီး OK ကိုနှိပ်ပါ ဓာတ်ပုံ box ကိုကိုယ်တိုင်ထည့်သွင်းရန်သင်သည်ဓာတ်ပုံ box ကိုရိုးရှင်းစွာနှိပ်ပြီးသင်ထည့်လိုသောအချက်အလက်ရင်းမြစ်ရှိရုပ်ပုံအကွက်၏အမည်ကိုရွေးပါလိမ့်မည်။
hoi4 wont စတင်
Image Data Source နေရာတွင်ဖော်ပြထားသောရည်ညွှန်းချက်သည်ဖိုင် extension ၏ရုပ်ပုံဖိုင်၏အမည်သာဖြစ်သည်ကိုသတိပြုပါ။ ဥပမာ၊ picturedot jpg တရားဝင်ဖြစ်နိုင်သည်ဤနယ်ပယ်တွင် Insert Image ကိုအသုံးပြုသောအခါပုံများပါသည့်ဖိုင်တွဲကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ Field dialog ခလုတ်၊ အကယ်၍ သင်သည် Image Field ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးပေါ်လာသည့် drop-down menu မှ More Image Options command ကိုရွေးချယ်ပါက၊ ဤဇယားကွက်အောက်ခြေရှိ Insert Image Field dialog box ကိုပြန်လည်ဖွင့်နိုင်သည်။ ထုတ်ဝေသူမှသင်သတ်မှတ်ထားသောအမည်များနှင့်အတူပုံများကိုရှာဖွေချင်သောဖိုဒါများ၏စာရင်းကိုကြည့်ရန် dialog box ကိုချဲ့ရန် Specify Folders ကိုအသုံးပြုပါ။ သင်၏ထုတ်ကုန်ပုံများပါသည့်ဖိုင်တွဲကိုဖွင့်ရန် Add ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ ထုတ်ကုန်ပုံပုံများပါသည့်ဖိုလ်ဒါကိုသင်ရွေးနိုင်သည်။ Browse ၀ င်းဒိုးကို Alt တနည်းအားဖြင့်သင်ပုံများကိုဤဒိုင်ယာလော့ခ်တွင်ဖော်ပြထားသောဖိုင်တွဲများထဲမှတစ်ခုသို့ရွှေ့ရုံသာသင်ပြီးဆုံးသောအခါ OK butto ကိုနှိပ်ပါ။ Insert Image Box ပေးတဲ့ dialog box ကိုပိတ်ဖို့အဲဒီ dialog box ထဲမှာ n ။ ပေါင်းစည်းခြင်းမပြုမီသင်၏ကက်တလောက်ထဲ၌ရှိသည့်အချက်အလက်များကိုကြည့်ရှုရန်“ Preview Page” ခလုတ်အုပ်စုတွင်အသုံးပြုသောခလုတ်များကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ သင်သည်ထုတ်ဝေသည့်စာမျက်နှာပေါ်မှအချက်အလက်များကိုကြည့်ရန် Preview ရလဒ်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပြထားသောဒေတာများကို scroll လုပ်ရန်ကပ်လျက် arrow ခလုတ်များကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင် preview ကိုနှစ်သက်သည်ဆိုလျှင် Mergebutton - the Format tab တွင်ရှိသောခလုတ်တစ်ချက်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်အချက်အလက်များကိုပေါင်းစည်းနိုင်သည်။ Tools contextual tab၊ ရလဒ်များကို catalog ထုတ်ဝေမှုအသစ်ထဲသို့ပေါင်းစည်းရန် Merge With New ခလုတ်ကိုသင်နှိပ်ပြီးသင်လိုအပ်သလိုတည်းဖြတ်နိုင်သည်။ Add to ရှိပြီးသားခလုတ်ကိုနှိပ်နိုင်သည်။ ရှိပြီးသား catalog ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုတွင် output ကိုထည့်သွင်းရန် Add ကိုနှိပ်ပါ။ ၎င်းသည်ပေါ်လာသည့်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည့် ၀ င်းဒိုးအတွင်းမှသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ output ကို Backstage မြင်ကွင်း၏ပုံနှိပ်ခြင်းရွေးစရာများကဏ္ send သို့ပေးပို့နိုင်သည်။ Catalog Tools မှဖဲကြိုး၏ Tab ၏ Format tab ရှိ Merge ခလုတ်အုပ်စု ren အတွင်းရှိ Print ခလုတ်ကိုနှိပ်ရုံဖြင့်ပုံနှိပ်ခြင်းရွေးစရာများကို ရွေးချယ်၍ ပုံနှိပ်စာလုံးကြီးကိုသင်မြင်သည့်အတိုင်းတိုက်ရိုက်ပုံနှိပ်နိုင်သည်။ အခမဲ့ရယူပါ မှာအပြည့်အဝသင်ခန်းစာမိတ္တူ
TO သို့Directory ကိုပေါင်းစည်းစာရင်းတစ်ခုကိုဖန်တီးရန်ဒေတာအရင်းအမြစ်မှသတ်မှတ်ထားသောအကွက်များကိုအသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်ကွန်ဖရင့်တစ်ခုအတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောသတင်းအချက်အလက်ပါ ၀ င်သည့်ဒေတာအရင်းအမြစ်တစ်ခုရှိနိုင်သည်။၃၁ သြဂုတ် 2020
မင်္ဂလာပါတို့၊ ဤဆောင်းပါးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၌စာပို့ခြင်းသို့သွားသောအခါရွေးစရာစာလုံးနှစ်လုံးနှင့်လမ်းညွှန်တစ်ခုကြားရှိခြားနားချက်ကိုကျွန်ုပ်ရှင်းပြပါမည်။ အကယ်၍ သင် mail merge tool တစ်ခုကိုဖန်တီးလိုပါကကျွန်ုပ်တို့ mailings သို့သွားပါ၊ ပထမခြေလှမ်းမှာ mail mail merge ဖြစ်ပါသည်။ Letters or Directory or options နှစ်ခုဒီတော့ဒီနှစ်ခုနဲ့စာလုံးယူတဲ့အခါကွာခြားချက်ကဘာလဲဆိုတော့ငါစာရွက်စာတမ်းတွေထုတ်တဲ့အခါစာရွက်တစ်ခုချင်းစီကသူ့ကိုယ်ပိုင်စာမျက်နှာကိုရသွားတာ။
mail merge နဲ့စကြပါစို့။ ကျွန်တော်စာတွေကိုသာရွေးလိုက်ပြီးလက်ခံရရှိသူများကိုရွေးပါမယ်။ ရှိပြီးသားစာရင်းကိုသုံးပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ရဲ့ Mail Merge ဖိုင်တွဲတွင်ရှိနေပြီးကျွန်ုပ်မှာအဆက်အသွယ်များရှိပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ mail merge fields ပေါင်းထည့်ပါ။ ဒီတော့ဒီမှာငါမှာ namespace surname ရှိတယ်။ ကုမ္ပဏီကိုဒီမှာထည့်လိုက်မယ်။ နေရာနဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဒီမှာထည့်ပါ။ ဒါကိုကြိုတင်ကြည့်ရအောင်။ Option အက္ခရာများဒီတော့ငါယခုသွားပြီးတစ် ဦး ချင်းစာရွက်စာတမ်းများကိုမတည်းဖြတ်ဘူးလို့ပြောလျှင်သူတို့အားလုံးအတွက်သွားကြပါစို့။ ဒါကအဆုံးရလဒ်ဖြစ်ကြောင်းသင်သိနိုင်ဖို့ပထမဆုံးအဆက်အသွယ်ရှိမယ်၊ ငါစာမျက်နှာအလွတ်ရှိသည်။ နောက်စာမျက်နှာနှင့်ဒုတိယအဆက်အသွယ်နှင့်တတိယစာမျက်နှာတတိယအဆက်အသွယ်စသည်တို့စသည်တို့ဖြစ်သည်။ သူ၏ကိုယ်ပိုင်စာမျက်နှာများသည် အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုအနီးကပ်မထားပါကကျွန်ုပ်ပြန်လာသည်ကိုမကယ်တင်ပါကကျွန်ုပ်၏စာရွက်စာတမ်းသို့ပြန်သွားပါကကျွန်ုပ်၏စာရွက်စာတမ်းများမှာသူ့ကိုယ်ပိုင်စာမျက်နှာဖြစ်သည်။ အခုဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာကို rectory ကနေရွေးလိုက်တာကတစ်ခုချင်းစီကိုအခြားအောက်မှာတွေ့ရမယ်။ ဟိုကိုကြည့်ရအောင် ဒါကအလုပ်မလုပ်ပဲငါပြောင်းလိုက်တာငါလုပ်ခဲ့တာတွေအားလုံးကိုညွှန်ပြတဲ့ directory ကိုပြောင်းလိုက်ပြီ။ အခုငါစာရွက်စာတမ်းတစ်ခုစီကိုတည်းဖြတ်ရန်ပြန်သွားသည်။ သင်မည်မျှမှီဝဲနေသည်ကိုသင်တွေ့သည်။ ပထမ၊ ပြီးတော့ဒုတိယလာသည်။ မင်းဒါကိုရွေးချယ်ခွင့်ဒါရိုက်တာတစ်ယောက်တွေ့နေတယ်၊ ​​မင်းဒါတွေကိုသူတို့တစ်ဖန်ပြန်ပြီးချိတ်ဆက်လိုက်မယ်။ အခုပျောက်နေတာတွေအားလုံးဟာအရာအားလုံးကိုပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိအောင်လုပ်ပေးတာတွေပါဘဲ။ ဒါကြောင့်ငါ့ကိုပိတ်ခွင့်ပြုပါလို့ငါ့ကိုမပိတ်လိုက်ပါနဲ့။ ဒီမှာကြည့်ပါ။ ဒီအရာကိုပဲပြောင်းလိုက်မယ်။ မင်းရဲ့စာရွက်စာတမ်းထဲမှာမင်းဘယ်လောက်နေရာပြန်လာမယ်ဆိုတာပြလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ပြန်ပို့ချက်တစ်ခု (သို့) နှစ်ခုကိုငါဒီမှာထည့်မယ်။ ငါ့ကိုပြန်စာပို့ပေးပါ။ တတိယမျဉ်းကသူတို့ကတစ်ဖက်အောက်မှာရှိတယ်၊ နောက်တစ်ကြောင်းကနောက်တစ်ခုပါ။ ဒါဆိုရင်နောက်စာမျက်နှာကိုသွားပါမယ်။ အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါကလမ်းညွှန်နဲ့စာရဲ့ကွာခြားချက်ပါ။ လိုင်းတစ်ခုချင်းစီဟာသီးခြားစာမျက်နှာတစ်ခုမှာရှိနေပါတယ်။ စာရင်းကဘာကိုဆိုလိုတာလဲ ယခုဒါရိုက်တာသည်ယခုကဲ့သို့သောကိစ္စရပ်များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏အဆက်အသွယ်အားလုံးကိုစာရင်းပြုစုထုတ်ဝေရန်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်၏ထုတ်ကုန်များနှင့်၎င်းတို့၏စျေးနှုန်းများနှင့်အဘယ်အရာရှိသနည်း၊ စာရင်းပြုစုပြီးဒါရိုက်တာရွေးချယ်မှုပြီးပြည့်စုံအောင်ပြုလုပ်ရန်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေလိုသည်။ အထူးသဖြင့်သုံးစွဲသူတိုင်းသည်စာမျက်နှာအပြည့်မပါသောကြောင့်ရွေးစရာစာရင်းသည်ပြီးပြည့်စုံသည်။ အက္ခရာများသည်ကိုယ်ပိုင်စာမျက်နှာတွင်သိသာနေပြီးရွေးချယ်စရာစာလုံးသည်တိုသည်။
File> New> New Document သို့သွားပါ။
တည်းဖြတ်ပါစာရင်းFields၊ Word မှအလိုအလျောက်ဖြည့်ပေးသောအလိုအလျောက်အကွက်များကိုတွေ့လိမ့်မည်။
သိမ်းဆည်းရန် (dialog) တွင်၊ ပေးပါစာရင်းနာမည်တစ်ခုနှင့်သိမ်းပါ။
ရိုးရိုးမေးလ်ပေါင်းစပ်မှုပြုလုပ်ရန်အဆင့် ၄ ဆင့်မှာအဘယ်နည်း။
အဆင့်3 - လက်ခံသူကိုရွေးပါ။
ဤသည်မှာ James Fox ဖြစ်သည်။ ဤဆောင်းပါး၏မိုက်ခရိုဆော့စကားလုံးအတွက်နောက်ထပ်ဆောင်းပါးသင်ခန်းစာဖြစ်သည်။ ယခုငါမိုက်ခရိုဆော့စကားလုံး ၂၀၁၀ တွင်မေးလ်ပေါင်းစည်းခြင်းအင်္ဂါရပ်ကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုသင်ပြမည်။ စာပို့ခြင်းပေါင်းစည်းခြင်းဆိုသည်မှာအဘယ်နည်းသို့မဟုတ်သင်ဘာလုပ်နိုင်သနည်း။ ကွဲပြားခြားနားသောလူများစွာထံစာတစ်စောင်သို့မဟုတ်တူညီသောစာတစ်စောင်ကိုပို့လိုပါကသင် mail merge ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည် Microsoft Office တင်းပလိတ်များဝက်ဘ်ဆိုက်မှကူးယူထားသောဤစာတွင်ရှိသည်နှင့်ကျွန်ုပ်သည်မှန်ကန်ကြောင်းဟန်ဆောင်ပါကထိုစာကိုပင်တူတူပို့ပါ။ ကွဲပြားခြားနားသောလူများစွာမှ, ဒါကြောင့်ငါအမိန့်ကိုစတင်ဘယ်မှာ? ဒီလိုလုပ်ဖို့သင်စာကိုဘယ်သူတွေပို့ချင်တယ်ဆိုတာစာရင်းပြုစုဖို့လိုတယ်၊ ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ။
ငါ Mailings tab ကိုနှိပ်ပြီး select လက်ခံသူများကိုနှိပ်ပါ။ စာရင်းအသစ်ကိုရိုက်ထည့်သည်။ မတူညီတဲ့ကော်လံတွေအများကြီးရှိတယ်။ သင်အသုံးပြုနိုင်သည်ခေါင်းစဉ်ကော်လံနှင့်မလိုအပ်သောအခြားကော်လံ ၂ ခုရှိပြီး Customizecolumn ကိုနှိပ်ပါ။ ငါဒီမှာစာရင်းကိုတွေ့နိုင်တယ်။ ငါမှာကုမ္ပဏီခေါင်းစဉ်အီးမလိုအပ်ဘူး၊ အခြားအရာတွေမလိုအပ်ဘူး။ ဒါကြောင့်ခေါင်းစဉ်နေရာရဲ့ခေါင်းစဉ်ကော်လံကိုမီးမောင်းထိုးပြပြီးဖျက်ပစ်ပြီးအတည်ပြုပါ။ ကုမ္ပဏီအမည်၊ နိုင်ငံ၊ ဒေသနှင့်ဖုန်းနံပါတ်များပါသောကြောင့်သင်တစ်စုံတစ် ဦး ၏ဖုန်းနံပါတ်ကိုစာလုံး၏ခေါင်းစဉ်တွင်မထည့်လို။ ဖြစ်သည်။ ပြီးလျှင် OK ကိုနှိပ်ပါ။ ဒီမှာတွေ့လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တွင်လယ်ကွင်းအမည်အတိအကျရှိသည်။ ကျွန်ုပ်ပထမအမည်နောက်ဆုံးလိုချင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ပထမအမည်ပေးမည်။ ကျွန်ုပ်ဤလယ်ကွက်၌ကျွန်ုပ်လုပ်သောအခါ tab ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ပါမည်။ ကျွန်ုပ်သည် John Doe ကိုရိုက်ထည့်လိုက်သည်၊ လိပ်စာမှာ ၁ ၂၃ Main Street နှင့်လိပ်စာဖြစ်သည်။ သူတို့မှာတိုက်ခန်းနံပါတ်တစ်ခုရှိရင်ဒါမှမဟုတ်လိုင်းနံပါတ်က ၂ ဖြစ်မယ်၊ ဒါဆိုငါတိုက်ခန်း ၁ ကိုမြို့ထဲမှာထားရင်မြို့တော်ဖြစ်မလား။ ယူအက်စ်တွင်မည်သည့်မြို့ဖြစ်ပါစေပြည်နယ်နှင့်စာပို့သင်္ကေတကိုသာထည့်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည် tab ကိုနှိပ်ပါ။ ဒုတိယစာကြောင်းသို့တိုက်ရိုက်သွားသည်။ အခြားအမည်နှင့်အခြားအချက်အလက်များကိုဤနေရာနှင့်ယခုအတူတူပင်ပြည်နယ်၊ zip code, ငါပြီးပြီအကုန်လုပ်ပြီးသွားပြီ ick ok ယခုသင်စာရင်းကိုသိမ်းရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းကိုအမည်ဖြင့်ပေးပါ။ ၎င်းကိုစမ်းသပ်ပြီးပါက၊ ယခုတွင် save on စာခေါင်းစဉ်ကိုနှိပ်ပါ။ Insert Mail Merge Field လို့ဒီမှာရေးလိုက်တာ။ ဒီနေရာမှာပထမနာမည်ကိုနှိပ်ပြီး space bar လိုချင်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းငါသွားတဲ့နောက်ဆုံးနာမည်ရဲ့ပထမနာမည်ကြားကအကွာအဝေးတစ်ခုလိုတယ်။ ငါသူ့ကိုလိုင်းအသစ်တစ်ခုမှာစချင်တာမဟုတ်ဘူး။ ဒီမှာလိပ်စာအချက်အလက်လိပ်စာ ၁၊ အဓိကလမ်းရဲ့ A ddress၊ ပြီးတော့လိပ်စာလိုင်း ၂၊ အဲဒီနောက်ငါထည့်လိုက်တဲ့တိုက်ခန်းကိုနှိပ်ပါ the city-state and zip code ယခုကာလအတွင်းနှင့် zip ကုဒ်များကိုထည့်သွင်းပါကဤနေရာသည်နေရာချထားသူများဖြစ်ပြီးသင်ဘာကိုပြလိမ့်မည်နည်း သင်သည်သင်၏အက္ခရာများကိုစတင် print ထုတ်သည့်အခါနှင့်တူလိမ့်မည်။
ဒီမှာငါလုပ်မယ့်အရာကတော့ preview ရလဒ်ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ t ငါ John Doe 123 Main Street စသည်ဖြင့်ရိုက်လိုက်တဲ့အပြောင်းအလဲကိုမြင်တွေ့ရပြီ။ နောက်လာမယ့်လက်ခံသူကိုကြည့်လိုက်ရင်ငါနှိပ်ပါ။ နောက်တစ်ခါမှတ်တမ်းရေးပြီးနောက်မှာ Jane Doe ကိုတွေ့ရမယ်။ ဒီမှာနှုတ်ခွန်းဆက်စကားမှာနာမည်ပြောင်းသွားတယ်။ အက္ခရာတွေအားလုံးအတွက်လုပ်ရမယ့်အရာကအခုအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ။ စာအိတ်တွေကိုငါရေးလိုက်တယ်။ ဤနေရာတွင်စာရွက်စာတမ်းအသစ်ကိုနှိပ်ပါ၊ စာပို့ခြင်း tab သို့သွားပါ။ Start Mailmerge ကိုနှိပ်ပြီးစာအိတ်များကိုနှိပ်ပါ၊ ပြီးနောက်ဤ dialog box ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ဤနေရာတွင်သင်သည် address address နှင့် font လက်ခံသူလိပ်စာများကိုသင်လိုချင်သည့်အရာကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ပြောင်းလဲလိုပါက OK ကိုနှိပ်ပါ။ ပြန်လာသည့်လိပ်စာအတွက်ကျွန်ုပ်၏အချက်အလက်သည်သင်မြင်ရလိမ့်မည်။ ထို့နောက် D area လက်ခံသူ၏အီးမေးလ်လိပ်စာကိုနေရာချပြီးထို Select သို့ပြန်သွားလိမ့်မည်။ လက်ခံသူများကိုရှိပြီးသားစာရင်းကို အသုံးပြု၍ စာရင်းပြုစုပြီးပါပြီ။ ကျွန်ုပ်ဖန်တီးလိုက်တဲ့စာရင်းကိုကျွန်တော်ရှာပြီးဖွင့်လိုက်ပါ။ ထို့နောက် mail merge box ထဲသို့ paste လုပ်ပြီး perti အကွက်အားလုံးထံစာလုံးပထမအမည် ပေး၍ address name လိုင်း ၁ နှင့်နှစ်ကို နှိပ်၍ preview ရလဒ်များကို နှိပ်၍ မပို့ခင်မြို့ပြည်နယ်နှင့်စာပို့သင်္ကေတများကိုထပ်မံပေးပို့လိုသည်။ စာအိတ်တွေကိုမပုံမနှိပ်ခင်ဘယ်လိုပုံလဲဆိုတာကြည့်ပါ။ နောက်တစ်ခေါက်မြှားတစ်ခုချင်းစီကိုနှိပ်ပြီးစာလုံးနှင့်စာအိတ်အတွက် serial အက္ခရာများကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာမေးကြည့်ပါ ဦး ။ ငါ့ကိုထပ်မံမေးပါ ဦး ။ နောက်တစ်ခါတွေ့မယ်
သင်က catalog ပေါင်းစည်းနှင့်အတူအဘယ်သို့ပြုနိုင်သနည်း
ထုတ်ဝေသူသည်ဒေတာဘေ့စ်၊ ဒေတာဘေ့စ်တစ်ခု၊ စာရင်းဇယားတစ်ခုသို့မဟုတ်စာသားဖိုင်တစ်ခုကဲ့သို့သောအချက်အလက်အရင်းအမြစ်နှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်ပြီးသင်၏ထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများစာရင်းကိုအလွယ်တကူဖန်တီးရန်အချက်အလက်များကိုအသုံးပြုသည်။ လမ်းညွှန်များ၊ ဓာတ်ပုံအယ်လ်ဘမ်များသို့မဟုတ်စာမျက်နှာတစ်ခုစီတွင်တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောအရာများကိုဖော်ပြသည့်အခြားထုတ်ဝေမှုအမျိုးအစားများကိုဖန်တီးရန် catalog ပေါင်းစည်းခြင်းကိုလည်းသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ဤသည်သည်သင်၏စာပို့ခြင်းစာစောင်၏အဓိကစာရွက်စာတမ်းဖြစ်ပြီးလက်ခံသူတစ် ဦး စီထံသို့ပေးပို့လိမ့်မည်။ စာပို့ခြင်းဘောင်ပေါ်တွင် နှိပ်၍ Start Mail Merge ကိုရွေးချယ်ပါ။ ကွဲပြားခြားနားသောမေးလ်ပေါင်းခြင်းစာရွက်စာတမ်းအမျိုးအစားတိုင်းကိုပြသသော drop-down menu ပေါ်လာမည်။ စာများ၊ အီးမေးလ်များ၊ စာအိတ်များ၊ စာပို့တံဆိပ်များသို့မဟုတ်လမ်းညွှန်အတွက်စာရွက်စာတမ်းအမျိုးအစားကိုသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
catalog ပေါင်းစည်း - ထုတ်ဝေသူ template ကိုဖန်တီးရန်ဘယ်လို?
Catalogue ပေါင်းစည်းပုံဘယ်လိုသင့်ရဲ့ catalog ကိုစီစဉ်ပါ template ကိုထုတ်ဝေမှုဖန်တီးသင့်ရဲ့ဒေတာအရင်းအမြစ်နှင့်ချိတ်ဆက်ပါထည့်ပေါင်းခြင်းလယ်ကွင်းထည့်ပါသင်၏ catalog ထုတ်ဝေဖြည့်စွက်ခြင်း, သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်သိမ်းဆည်းခြင်း catalog ပေါင်းစည်းအလုပ်လုပ်ပုံ Catalog merge သည် mail merge နှင့်ဆင်တူသည်။
Excel တွင် directory mail တစ်ခုဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။
Directory Mail ပေါင်းစည်းမှုသည် Excel ကဲ့သို့သောအချက်အလက်ရင်းမြစ်မှသတ်မှတ်ထားသောအကွက်များကိုစာရင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်စာရွက်စာတမ်းများဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်ကွန်ဖရင့်တစ်ခုအတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောသတင်းအချက်အလက်ပါ ၀ င်သည့်ဒေတာအရင်းအမြစ်တစ်ခုရှိနိုင်သည်။ ဒီဒေတာအရင်းအမြစ်မှစာရင်းတစ်ခုကိုသင်ထုတ်လုပ်ချင်တယ်